Saturday June 15, 2019 - 16:33:14 in Wararka by Liibaan Jeexoow
dhulka Soomaalida NFD ayaa ku jira gummeysiga Kenya
Wararka ka imaanaya gobolka Wajeer ayaa sheegaya in qarax aad u xooggan lala helay gaari kooyal ah oo ay la socdeen ciidamada Booliska Kenya xilli uu marayay wadada xiriirisa deegaannada qorod Xareer iyo Koton oo dhammaantood katirsan Wajeer.
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Al Shabaab ayaa lagu sheegay in qaraxa lagu dilay in kabadan 10 askari Kenyaan ah gaar ahaan kuwa loo yaqaan (AP) oo ah ciidamo Boolis ah.
"Mujaahidiinta ayaa weerar ka dhacay gobolka Wajeer ku dilay in kabadan 10 katirsan ciidamada boolisk dowladda Saliibiyiinta Kenya, mujaahidiintu waxay cadowga kasoo qaniimeysteen illaa sagaal qori" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Al Shabaab.
Dhinaca kale weerar hubeysan oo xoogagga Al Shabaab ay ka fuliyeen tuulada Booja Garas oo hoos tagta Wajeer ayaa lagu dilay askari katirsan ciidamada booliska Kenya, dadka deegaanka ayaa sheegay in xoogaga Al Shabaab ay si buuxda ula wareegeen gacan ku heynta deegaanka.
Qarax kale oo saaka aroortii ka dhacay tuulada Sheekh Barroow ee duleedka degmada Mandheera ayaa sababay burbur xooggan oo gaaray gaari booyad ah oo ay la socdeen ciidamada Melleteriga Kenya.
Howlgal kale oo ciidamada Al Shabaab ay ka fuliyeen deegaanka Falama ee duleedka magaalada Mandheera ayay ugu suurtagashay in ay si buuxda ula wareegaan gacan ku heynta deegaanka.
Saraakiil katirsan ciidamada Al Shabaab ayaa goob fagaare ah uga muxaadareeyay dadka deegaanka Falama waxayna ugu baaqeen in ay ka qeyb qaataan dagaalka jihaadka ah ee lagula jiro dowladda gumeysiga Kenya.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in xoogagga Al Shabaab ay dib uga gurteen deegaannadii ay ka qabsadeen gobollada Wajeer iyo Mandheera iyagoo aan wax iska caabin ah kala kulmin ciidamada Kenya.
Shalay ayay aheyd markii weerar ka dhacay tuulada Konton ee gobolka Wajeer ay Al Shabaab kusoo afduubteen illaa sedax askari oo katirsan ciidamada Booliska islamarkaana ay horay usii qaateen gaadiid ay isticmaalayeen ciidamada Kenya.
Ciidamada Melleteriga Kenya ayaa sanaddii 2011 duullaan gardarra ah kusoo qaaday dalka Soomaaliya gaar ahaan gobollada Gedo iyo Jubbada hoose balse Al Shabaab ayaa dhankeeda uga jawaabtay weeraro joogta ah oo ay ku heyso gobolka Lamu iyo dhulka Soomaalida NFD ee muslimiina laga heysto.
Mareykanka oo qirtay in Askar looga dilay Afghanistan iyo Taliban oo diyaarad burburisay.
Mareykanka oo duqayn ku dilay Nin Ganacsade caan ka ahaa Gobolka Shabeellaha Hoose.